Yangon Chief Minister’s Comments ‘Insult’ Myanmar Army - Myanmar News - Mingalapar Forum
Started by BurmeseNews , Jul 14 2017 02:38 AM
Posted 14 July 2017 - 02:38 AM
The Myanmar Army said Yangon’s chief minister is not suitable for “constructive, long-term relations” with the army based on his comments about the military chief .
မြန်မာ့တပ်မတော်အနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာ အပြုသဘောဆောင်ပြီးရေရှည်ဆက်ဆံသင့်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိအစိုးရကိုလည်း ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ စကားအပေါ်မှာ လိုအပ်သလို အရေးယူပေးဖို့ တင်ပြထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။
အခမ်းအနားတခုမှာ ၀န်ကြီးချုပ်ပြောခဲ့တဲ့ အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးမရှိဘူးဆိုတာရယ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟာ ညွန်ချုပ်အဆင့်ပဲရှိတယ်လို့ ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး အငြင်းပွားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
source ; Irrawaddy, Minister's comment.
Also tagged with one or more of these keywords: Military, Minister
Started by BurmeseNews , 06 Aug 2017 Minister